एमसीसीबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक, विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदै - समाचार - कान्तिपुर समाचार
एमसीसीबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक, विभिन्न विकल्पमा छलफल हुँदै
नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र संविधान संसोधनपछि नेकपाको एमसीसीलाई बनायो छलफलको मुख्य विषय
जेष्ठ ३२, २०७७ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — सम्झौता कार्यान्वयनको समयसीमा नजिकिदै जाँदा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनको विषय टुंगाउने गरी नेकपाले सघन छलफल सुरु गरेको छ । यसका लागि नेकपाले आज पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएको छ । यसअघि जेठ २७ का लागि एमसीसीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो ।
संसदको चालू अधिवेशनबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र नेपालको संविधानको अनुसूचि–३ मा रहेको निछान छाप संसोधनसम्बन्धी विद्येयक पारित भएपछि नेकपाले अब छलफलको मुख्य विषय एमसीसीलाई बनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आज बोलाइएको बैठकको मुख्य एजेन्डा एमसीसी नै हो ।
आजको बैठकमा नेकपाले गठन गरेको नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदलका सदस्य र अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएइको छ । कार्यदल संयोजक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सचिवालय सदस्य छन् । भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली कार्यदल सदस्य छन् । यसबाहेक बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि बोलाइएको छ ।
यसअघि पनि नेकपाले दुईवटा सचिवालय बैठकमा कार्यदल सदस्य र सरोकारवालापक्षका प्रतिनिधिलाई बोलाएर एमसीसी अनुमोदनबारे छलफल गरेको थियो । तर, पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर एकरुपता नहुँदा यसको अनुमोदनको विषय टुंगिन कठिन भएको छ । यद्यपि नेताहरुले अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे पार्टीले अब छिट्टै नै अन्तिम निर्णय लिने बताएका छन् ।
एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका सचिवालयका बहुमत सदस्य एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो वा होइन भन्नेबारे अमेरिकासँग स्पष्ट जवाफ मागेर यसको अनुमोदनको पक्षमा छन् । स्थायी कमिटीका केही नेताहरु एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको दावी गर्दै यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । यही कारण नेकपाभित्र एमसीसीको मुद्दा जटिल र विवादित बन्दै गएको छ ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताअनुसार यसको कार्यान्वयन असार १६ बाट हुनुपर्नेछ । त्यसअगाडि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले झन्डै एक बर्षदेखि थाँती रहेको विषय भएकाले नेकपा तत्काल टुंगाउनुपर्ने दवावमा छ । गत बर्ष असार ३१ मै एमसीसी सम्झौता संसदमा दर्ता भएको छ । तर, अनुमोदनका लागि भने संसदमा टेबुल भएको छैन । यसअघि नेकपाले नीति तथा कार्यक्रमपछि जेठ १० मा बजेटपछि जेठ १७ मा एमसीसीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर स्थायी कमिटी बैठक गरेको थियो ।
पार्टीभित्र सहमति जुटाउन कठिन भएपछि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी संसदमा प्रवेश गरेको विषय भएकाले आवश्यक निर्णय संसदले लिने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत एमसीसीका परियोजना र बजेट समेटिएपछि यो विषयमा थप विवाद सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास नभए कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा उठने बताएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ १४:२४
कोरोना फैलाउने 'सुपर स्प्रेडर' !
सुपर स्प्रेडरले लक्षण नै देखाउनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमा अत्यधिक संक्रमित लक्षणविहीन छन् । यदि संक्रमित लक्षणविहीन तर सुपर स्प्रेडर भए त्यो नेपालका लागि चुनौती हुनेछ ।
जेष्ठ ३२, २०७७ डा. शेरबहादुर पुन
कसैलाई कोरोना लागेको छ भन्ने सुन्नेबित्तिकै हामी तर्सन्छौं । हुन पनि स्वदेशी/विदेशी सञ्चारमाध्यममा विशेषत: संक्रमितको बढ्दो संख्या र मृत्युको समाचार प्रवाह हुँदा नतर्सिने कुरै भएन । संक्रमित हुनेबित्तिकै त्यसबाट कोरोना अनिवार्य सर्छ भन्ने लाग्नाले पनि त्रासको मात्र स्वाभाविक रुपमा बढ्छ ।
एक संक्रमितले क्वारेन्टाइनको नियम पालना नगर्दा आफन्तलाई कोरोना भाइरस संक्रमण सारेपछि नेपाल दोस्रो अथवा स्थानीय स्तरको प्रसारणको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । यो नै नेपालमा मानिसबाट मानिसमा कोरोना संक्रमण सारेको पहिलो प्रमाणित घटना थियो । तत्पश्चात् संक्रमितहरु देखिने क्रम बढ्दै गए पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुँदै जाँदा अति न्यून संख्यामा मात्र संक्रमण अरुमा सरेको देखिन्छ ।अर्को शब्दमा भन्दा, सबै संक्रमितबाट कोरोना सहजै सर्ने रहेनछ । तर केही संक्रमित यस्ता पनि हुन्छन्, जसले एकैपटकमा दर्जनौंलाई संक्रमण सार्न सक्ने क्षमता राख्छन् । पछिल्लो समय विश्वमा केही घटना यस्तै संक्रमितसँग सम्बन्धित देखिएका छन् । यस्ता संक्रमितलाई 'सुपर स्प्रेडर'को नाम दिइएको छ ।
सुपर स्प्रेडरका बारेमा अनुसन्धानकर्ताहरुले पहिलो सार्स महामारीको बेलामा पनि उल्लेख गरेका थिए । कुनै संक्रमितले कम्तीमा पनि आठ जनाभन्दा बढीलाई संक्रमण सार्ने क्षमता राख्दछ भने त्यसलाई सुपर स्प्रेडर भनिएको छ । केही महिनाअघि बेलायती वैज्ञानिकहरुले एक कोरोना संक्रमितले थप झन्डै तीन जना व्यक्तिलाई संक्रमित पार्न सक्ने अनुमानित अंकगणित निकालेका थिए । तर पाँच संक्रमितमध्ये एक जनाले मात्र धेरैलाई संक्रमण सार्न सक्छन्, जसलाई वैज्ञानिकहरुले २०/८० को नियम भन्ने गरेका छन् ।
नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरुदेखि नै हुँदै आएको छ ।अधिकांश ट्रेसिङ गर्दा संक्रमित व्यक्तिका सम्पर्कमा आएकाहरुमा कोरोना नेगेटिभ नै देखिएको छ । यसले पनि सबै संक्रमित हुनेबित्तिकै तिनले अरुलाई संक्रमण सजिलै सार्दैनन् भन्ने देखाउँछ । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका केही समयअघि कोरोनाको 'हटस्पट' बनेको थियो । जहाँ एकैपटक ११८ जना संक्रमित भएका थिए । जसमा एक जनाको मृत्यु भयो, बाँकी सबै कोरोनामुक्त भई घर फर्केका थिए । यहाँ यति धेरैलाई संक्रमित गराउनमा सुपर स्प्रेडरको भूमिका थियो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा यस्ता धेरै घटना (एक्कासि दर्जनौं संक्रमित हुने) आजको मितिसम्म खासै नदेखिएकाले सुपर स्प्रेडर संक्रमितहरु माथि भनिएझैं धेरै संख्यामा छैनन् कि भनेर बुझ्न सकिन्छ । सुपर स्प्रेडरले लक्षण नै देखाउनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमा अत्यधिक संक्रमित लक्षणविहीन अवस्थामा छन् । यदि संक्रमित लक्षणविहीन तर सुपर स्प्रेडर भए त्यो नेपालका लागि चुनौती हुनेछ । किनभने त्यस्ता संक्रमित पत्ता लगाउन सहज हुनेछैन भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्न ढिला हुनेछ ।
केही देशमा कोरोना भाइरसको प्रकोप देखिनुमा यही सुपर स्प्रेडरको घटनालाई प्रमुख मान्ने गरिएको छ । सुपर स्प्रेडरका घटनामध्ये कोरिया र अमेरिकाको घटना बढी चर्चित छ । ६१ वर्षीया कोरियाली महिला (जसलाई 'बिरामी संख्या ३१' को संज्ञा दिएको छ) एक गिर्जाघरमा उपस्थिति हुँदा कम्तीमा ४३ जनामा संक्रमण सरेको पत्ता लागेको थियो । त्यो घटनाभन्दा अगाडि पनि कोरियामा केहीमा कोरोना त देखिएको थियो तथापि सुपर स्प्रेडरको त्यो घटनापछि ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिन थालेको कोरियाली स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाइ छ । अमेरिकाको वासिङ्गटनमा गीत गाउन भेला भएका मध्ये एक जना सुपर स्प्रेडर हुँदा त्यहाँ उपस्थित ८७ प्रतिशत संक्रमित भएका थिए । जसमा दुई जनाको मृत्युसमेत भयो । वैज्ञानिकहरुका अनुसार पारिवारिक भेटघाट, मठमन्दिर, अस्पताल वा कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा सुपर स्प्रेडर घटना बढी हुने सम्भावना रहन्छ ।
सुपर स्प्रेडर कस्तो हुन्छ ? किन हुन्छ ? र, नेपालमा यसको अवस्था के छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर त्यति सहज र ठोस छैन । सामान्यतय घटना भइसकेपछि कारण पत्ता लगाउने क्रममा मात्र सुपर स्प्रेडर पत्ता लाग्ने गरेको विगतका घटनाले देखाउँछ । तसर्थ मानिसको बाहिरी स्वरुप वा कुनै प्रयोगशाला परीक्षणबाट सुपर स्प्रेडर को हुन सक्छ भनेर ठम्याउन सकिँदैन । सुपर स्प्रेडरले किन सामान्य औसत संख्याभन्दा बढीलाई संक्रमित गर्छ भन्नेमा पनि सबै वैज्ञानिक एकमत भएको पाइँदैन । कोरोना भाइरस संख्याको भार धेरै हुँदा सो संक्रमित व्यक्तिले अरु धेरैलाई सजिलै सार्न सक्ने अनुमान गरेको पाइन्छ । सो संक्रमितमा थप अरु संक्रमण छ भने पनि धेरैमा भाइरस फैलाउन संक्ने अनुमान गरिन्छ ।
नेपालमा सुपर स्प्रेडरबारे खासै बहस हुने गरेको छैन । बाँकेको नरैनापुरमा एकैपटक धेरैमा संक्रमण देखिएकाले सो ठाउँमा सुपर स्प्रेडर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बीबीसीका अनुसार केही महिनाअघि छिमेकी देश भारतको उत्तर पन्जाबमा कोरोनाको प्रकोप फैलिएको थियो र एक ७० वर्षीय मानिसको मृत्यु भएको थियो । यो दुवै घटनाको सम्बन्ध इटाली र जर्मन भ्रमणपछि फर्केका एक कोरोना संक्रमित व्यक्तिसँग भएको पत्ता लागेको थियो । ती व्यक्ति सुपर स्प्रेडर थिए । सेल्फ क्वारेन्टाइनलाई बेवास्ता गर्दै विभिन्न उत्सव, पार्टी आदिमा सहभागी हुँदा पन्जाबको २० गाउँका ४० हजार स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बस्नुपरेको बीबीसीले लेखेको छ ।
सुपर स्प्रेडर संक्रमितबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको भौतिक दूरी कायम गर्नु नै हो । तसर्थ सकेसम्म धेरै जना उपस्थित हुने ठाउँ वा सार्वजनिक स्थलमा नजानु नै उत्तम हुन्छ ।
केही समयअघि लन्डन स्कुल अफ ट्रोपिकल मेडिसिन एन्ड हाइजिनका वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान गरेका थिए । लकडाउनअगाडि निकालेको अनुमानित तथ्यांक अर्थात् एक संक्रमितबाट झन्डै तीन जनासम्मलाई कोरोना भाइरस सार्न सक्ने प्रक्षेपण गरेकोमा लकडाउनपश्चात् त्यो अनुमानित दर घटेर एक जनाभन्दा पनि कमलाई मात्र सार्न सक्ने भन्ने उनीहरुले नतिजा सार्वजनिक गरे । यसको क्रेडिट वैज्ञानिकहरुले लकडाउन अर्थात् भौतिक दूरीलाई नै दिएको देखिन्छ । यद्यपि हालै बेलायतमा लकडाउन खुकुलो गर्दै गर्दा भौतिक दूरीलाई बेवास्ता नगर्न वैज्ञानिकहरुले सुझाव दिएका छन । नेपालमा पनि लकडाउन खुकुलो भएसँगै भौतिक दूरीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहँदै गर्दा आगामी दिनमा सुपर स्प्रेडर संक्रमित हामीबीचबाटै ननिक्लेला भन्न सकिँदैन । त्यस्ता संक्रमित लक्षणविहीन भए ठुलो चुनौती हुने देखिन्छ । तथापि भिडभाडमा नजानु अथवा जानैपरे अनिवार्य भौतिक दूरी कायम गर्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ । साबुनपानीले नियमित हात धुनु र धेरै मानिसको उपस्थिति हुने ठाउँमा मास्क अनिवार्य लगाउनु कोरोनाबाट बच्ने थप मुख्य उपाय हुन् ।
-लेखक शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ १४:१०